बोक्सीले रगत चुस्दा शरीरमा निलो दाग बस्छ ? यी ८ कारणले बताउँछ वास्तविकता – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Health/बोक्सीले रगत चुस्दा शरीरमा निलो दाग बस्छ ? यी ८ कारणले बताउँछ वास्तविकता
जण्डिसको दबाई ‘पानी अमला’ कसरी प्रयोग गर्ने ?
समुद्रशास्त्र : तपाईंको दाँत खप्टिएको त छैन, यस्ता विशेषता हुँदा भाग्यमानी !
६९ वर्षसम्म बिरामीको उपचारमा सक्रिय बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.पिया